MODA | Article Detail | ကိုလိုနီခေတ် ဗမာဖက်ရှင်များနဲ့ “မီ” ရုပ်ရှင်ကား
ကိုလိုနီခေတ် ဗမာဖက်ရှင်များနဲ့ “မီ” ရုပ်ရှင်ကား
ရှေးခေတ်မြန်မာဝတ်စုံများကို ခုံမင်သူများနဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ ဖက်ရှင်ကို စိတ်ဝင်စားသူများ မဖြစ်မနေကြည့်ရမယ့် ရုပ်ရှင်ကား။ ဒီပွင့်လင်းရာသီရဲ့ ပွဲတက်ဝတ်စုံတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရင် ပိုင်ဖြိုးသုဝတ်တဲ့ “မီ” ဝတ်စုံတွေကို လေ့လာလိုက်နော်…
by Min Chit Paing
မီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ဆရာမ ကြည်အေးရဲ့ လူပြောသူပြောများလှတဲ့ “မီ” ဝတၳုကို ဒါရိုက်တာ ဏကြီးမှ ပိုင်ဖြိုးသု ကို အဓိကဇာတ်ကောင် မီ နေရာမှာ ထားပြီး ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားတွင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်များအဖြစ် နေတိုး၊ ရဲအောင်၊ မင်းဦး၊ သားညီ နဲ့ အောင်ရဲထိုက် တို့လည်းပါဝင်အားဖြည့် ထားပါသေးတယ်။
“ မီ ” ဝတၳုဟာ သမိုင်းကြီးလှသလို ဒါရိုက်တာ ဏကြီးက လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားကို မီ Official Teaser တွင် တစ်ပိုင်းတစ်စ မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာကတည်းက ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အသေးစိတ်ကျလှသော မြန်မာ ရုပ်ရှင်တင်ဆင်မှုတစ်ခုကိုလည်း အဲဒီရုပ်ရှင်မှာ ပြန်လည် တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကျလှပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ အကောင်းဆုံးသော Production Design အပြင် ခေတ်ရယ်၊ ဇာတ်ရယ် နဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ Costume Design ကိုလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် တွေ့ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မီ အဖြစ်သရုပ်ဆောင်မယ့် ပိုင်ဖြိုးသုအတွက် ဝတ်စုံပေါင်း (၁၀၀) ကျော်နဲ့ ဇာတ်ကား တစ်ခုလုံးအတွက် ဝတ်စုံပေါင်း (၅၀၀) ကျော်ကို အသုံးပြုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီပွင့်လင်းရာသီရဲ့ ပွဲတက်ဝတ်စုံတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရင် ပိုင်ဖြိုးသုဝတ်တဲ့ “မီ” ဝတ်စုံတွေကို လေ့လာလိုက်နော်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ဝတ်စုံတွေချည်းပဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် တန်နေပြီလို့ ပြောရမယ့် ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆရာမ ကြည်အေးရဲ့ ခိုင်မာနက်နဲလှတဲ့ “မီ” ဇာတ်လမ်းက သင့်ကို ဘယ်တော့မှ စိတ်ပျက်စေမှာ မဟုတ်ပါ။ မောင်ကို (အောင်ရဲထိုက်) က သော်ဆွေ (နေတိုး) ကို မီအကြောင်း ပြောပြနေတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းမှာ ဆိုရင်တော့ မောင်ကို နဲ့ မီ တွေ့ဆုံပုံနဲ့ သော်ဆွေ နဲ့ မီ တွေ့ဆုံမှု နှစ်ခု ကို လှလှပပ တည်းဖြတ် တင်ဆက်ထား တဲ့ ဏကြီးရဲ့ လက်ရာဟာ ရုပ်ရှင်အနုပညာ ဆိုတဲ့ အနှစ်သာရတစ်ခုကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ပေးစွမ်း နိုင်မှာ အသေချာပဲနော်။ အောက်က Official Teaser လေးမှာ အနည်းငယ်ခံစားပြီး ဇာတ်ကားကြီးတစ်ခုလုံးကို လာမယ့် အောက်တိုဘာမှာ ကြည့်ဖို့ ပြင်ထားလိုက်ရအောင်နော်။
Editor : Min Chit Paing
စံချိန်ချိုးတဲ့ အားပေးမှုအမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိနေတဲ့ The World of Married Couple
ဒီကာလလေးမှာ The World of Married Couple Series ကို မသိသူမရှိသလို ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုတွေဟာလည်း တစ်ပတ်ထက်တစ်ပတ် ပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ အပိုင်း ၁၆ ပိုင်းပါဝင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တာတဲ့ ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲကို စတင်ပြသချိန်ကတည်းက ပရိသတ်အားပေးမှုက အရှိန်မြင့်တက်လာခဲ့ရာ ဒီတစ်ပတ် တနင်္ဂနွေ ဆိုရင်တော့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ ပရိသတ်ကြည့်ရှု့မှုနှုန်း Rating ဟာ တရိပ်ရိပ်ဖြင့် မြင့်တက်လာခဲ့ရာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုအများဆုံး Crash Landing on You ဇာတ်လမ်းတွဲထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် မြင့်တက်နေပြီဖြစ်ပြီး Rating အမြင့်ဆုံးစံချိန်ချိုးတဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။
ပုံမှန်မြင်နေကျ အိမ်ထောင်ရေးဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေ ခွဲထွက်နေတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ကြည့်ရှု့သူ ပရိသတ်တွေအတွက် အသဲတယားယားဖြစ်စေပါတယ်။ ထင်မှတ်မထားတဲ့ မြှုပ်ကွက်တွေ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကလည်း ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။
ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ သစ္စာဖောက်သူတွေ ဝိုင်းနေတဲ့ကြားက ကြံံံံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ပြီး သူတို့တွေ မထင်မှတ်ထားရလောက်အောင် သန်မာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၊ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မြင်တွေ့ရပြီး တစ်ဖက်မှာလည်း အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့် မုန်းတီးနေပေမယ့် ချစ်ခဲ့ရတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ယောကျာ်းကို မပြတ်သားနိုင်တဲ့ဇာတ်ကွက်တွေက ပရိသတ်ကို မချိတင်ကဲ ဖြစ်စေတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေပါ။
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ လင်မယားဖြစ်ပြီးရုံနဲ့ သံယောဇဉ်အမျှင်မပြတ်ဘဲ ထပ်တလဲလဲ ပြန်လည်တွေ့ဆုံနေရတဲ့ ကံတရားရဲ့ လှည့်ကွက်တွေကြားမှာ ဘယ်လိုဇာတ်သိမ်းမလဲ။ ပရိသတ်ထင်မှတ်မထားတဲ့ ဇာတ်သိမ်းမျိုးဖြစ်လာမှာလား။ ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကျ ဇာတ်လမ်းတွေလိုပဲ ဇာတ်သိမ်းမလားဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်မှပဲ သိရတော့မှာမို့ The World of Married Couple ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို လက်မလွှတ်တမ်း စောင့်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
#The World of Married Couple
ကမ္ဘာကျော်ဇာတ်ကားတွေမှာပါ၀င်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ လက်ရာများ
ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားမှာ ဖက်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ကလည်း အရမ်းကိုအရေးပါပါတယ်
Stay at home ကာလမှာ အဓိကလူစိတ်၀င်စားခြင်းအခံရဆုံးအရာတစ်ခု ကိုပြပါဆိုရင် Movies တွေကိုချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတိုင်းဟာ မတူညီတဲ့ အနုပညာပေါင်းများစွာကိုပေါင်းစပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အခမ်းနားဆုံးအသီးအပွင့်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လည်း လူတွေဟာ ဒီလိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကပေးတဲ့ ရသမျိုးစုံကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ရယူလိုကြပါတယ်။ အခုလို အဘက်ဘက်ကပညာရှင်တွေ ပေါင်းစပ်ပါ၀င်ထားကြတဲ့အထဲမှာ ရုပ်ရှင်ရဲ့ ‌နောက်ထပ်အသက်တစ်ခုလို့ဆိုရမယ့် အ၀တ်အစားဆင်ယင်မှူပိုင်းကိုလည်း ချန်လှပ်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ‌ခေတ်အဆက်ဆက်က ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ ဘယ်လိုကမ္ဘာကျော်ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့လက်ရာများစွာ ပါ၀င်ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားပြီး ဘယ်လောက်ထိလွှမ်းမိုးမှူတွေရှိခဲ့လဲဆိုတာ သိချင်ကြတဲ့ ဖက်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဇာတ်ကားတွေထဲကတချို့ကို ရွေးချယ်စုစည်းပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Stage Fright ဆိုတာဟာ 1950 ခုနှစ်ခန့်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သည်းထိပ်ရင်ဖို ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်မင်းသမီးနေရာကပါ၀င်တဲ့ Marlene Dietrich က သူမရဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကိုပေါ်လွင်စေမယ့် ၀တ်စုံတွေကို စီစဉ်ချုပ်လုပ်ပေးဖို့အတွက် သူမရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ Christian Dior ကိုငှားရမ်းအသုံးပြုစေခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးစာအတွက် သူမရဲ့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်ပြီး ခေတ်စားစေခဲ့တဲ့ စကတ်အရှည်တွေနဲ့ လှပတဲ့ dress တွေကို Dior က‌ အကောင်းဆုံး ဖန်တီးပေးခဲ့တာတွေ့ရမှာပါ။
2.And God Created Woman
1956 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Roger Vadim ရဲ့ And God Created Woman ဇာတ်ကားမှာတော့ Pierre Balmain ရဲ့ လက်ရာကောင်းတွေကို တွေ့ရှိရမှာပါ။ Balmain က ဇာတ်ဆောင်မင်းသမီး Brigitte Bardot အတွက် ရိုးရှင်းပြီးလှပတဲ့ Summer Wear တွေကိုဖန်တီးချုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားတစ်လျှောက် သူမ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ လည်ဝိုက်အင်္ကျီတွေနဲ့ ကြယ်သီးတပ်စကတ်တွေဟာ အရမ်းကိုနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းအစမှာ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Audrey Hepburn ရဲ့ Iconic look ကို သတိမထားမိပဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Tiffany's မှာ Window Shopping ထွက်ဖို့အတွက် Audrey ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Iconic ဂါ၀န်အနက်ရောင်ကို ဖန်တီးချုပ်လုပ်ခဲ့သူကတော့ Hubert de Givenchy ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဂါ၀န်အနက်ရောင်ကိုမှ accessories တွေအနေနဲ့ လက်အိတ်အမည်းအရှည်နဲ့ ပုလဲလည်ဆွဲတွေကို ထပ်ပေါင်းဖြည့်စွက်ထားပြီး အခုချိန်ထိတိုင် Iconic dress တစ်ခုအနေနဲ့ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့အထိ မိမိုက်နေခဲ့ပါတယ်။
4.Last Year in Marienbad
1961 ခုနှစ်က Best Academy Award for Best Original Screenplay အနေနဲ့ စကာတင်စာရင်း၀င်ခဲ့တဲ့ Last Year in Marienbad ပြင်သစ်ဒရာမာဇာတ်ကားမှာ Delphine Seyrig အတွက် dress တွေကို Coco Chanel ကတာ၀န်ယူဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ ပုလဲတွေ၊ဇာတွေနဲ့ စီခြယ်ထားတဲ့ ရှဖွန်လိုပိတ်စအသားမျိုးတွေနဲ့ အသေးစိတ်ဖန်တီးမှူတွေပေါ်မှာ Focus လုပ်ထားပြီး အတော်လေးကို လှပတဲ့ Dress တွေကို တွေ့ရမှာပါ။
1970 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်ကားကတော့ လိင်မှူရေးရာပိုင်းတွေအနည်းငယ်ပါ၀င်ပြီး ပြင်သစ်မိန်းမပျိုတစ်ယောက်ရဲ့ မြေအောက်ခန်းထဲက အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက် အသုံးပြုတဲ့၀တ်စုံကို Karl Lagerfeld ကဖန်တီးချုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ ခုချိန်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ နာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာကြီး Karl Lagerfeld က ဒီဇာတ်ကားမှာ ဇာတ်ဆောင်မင်းသမီးရဲ့ ရမ္မက်ဆန်တဲ့အလှကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက် လည်သာနဲ့ Latex ကိုပေါင်းစပ်ပြီး အလိုက်ဖက်ဆုံး ထိထိမိမိဖန်တီးပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
6.The Fifth Element
1997 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Luc Besson ရဲ့ အနာဂါတ်သိပ္ပံ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်း The Fifth Element မှာတော့ ကမ္ဘာကျော်ဒီဇိုင်နာ Jean Paul Gaultier က Futuristic ဆန်ဆန် ၀တ်စုံတွေကို ဖန်တီးချုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ Milla Jonvovich ရဲ့ ပတ်တီးပုံစံ ကိုယ်ကြပ်၀တ်စုံကစလို့ အမှူထမ်းမိန်းမပျိုလေးတွေရဲ့ sexy ကျကျ ယူနီဖောင်းတွေအထိ သေချာဒီဇိုင်းဆွဲဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး ဇာတ်ကားရဲ့သရုပ်သဘာ၀ကိုလည်း တော်တော်လေးကို ‌အထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။
2006 ခုနှစ်မှာပြသခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ဇာတ်ဆောင်မင်းသမီး Kristen Dunst အတွက် လှပခမ်းနားတဲ့၀တ်စုံတွေကို Milena Canonero ကဖန်တီးစီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ တော်၀င်ဆန်တဲ့ ဖိနပ်တွေအတွက်ကိုတော့ ကမ္ဘာကျော် Shoe Designer ဖြစ်တဲ့ Manolo Bahlik ကတာ၀န်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဘုရင်မကြီး Marie Antoinette ရဲ့ တော်၀င်မျိုးနွယ် ဇာတ်ရုပ်နဲ့လိုက်အောင် သူမရဲ့ ဖိနပ်တွေနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဆင်တူစေမယ့် အနားတွန့်တွေ၊ ကြိုးတွဲလောင်းလေးတွေ ထည့်သွင်းဆင်ယင်ထားတဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်တွေကို လက်ရာမြောက်ဖန်တီးထားတာဟာ ဩချရလောက်အောင်ပါပဲ။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ မသိသူတော်တော်ရှားပါလိမ့်မယ်။ မင်းသမီးကြီး Natalie Portman ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အနုပညာပေါ်ရူးသွပ်စွာသက်၀င်ခံစားတတ်တဲ့ ဘဲလေးကချေသည်တစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကို အ၀တ်အစားပိုင်းနဲ့ အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ White Swan အနေနဲ့ရော Black Swan အနေနဲ့ပါ ကာရိုက်တာနှစ်မျိုးလုံးအတွက် ဘဲလေး၀တ်စုံကိုစီစဉ်ပေးခဲ့ပြီး Natalie ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှူတွေနဲ့တွဲဖက်လိုက်တဲ့အခါ အရမ်းကိုရသမြောက်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
9. The Great Gastby
ဖက်ရှင်‌ရဲ့ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ပြယုဂ်တစ်ခုလို့တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ရမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး The Great Gastby ကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားထဲက Carey Mulligan ရဲ့ လှပကျက်သရေရှိတဲ့ ၀တ်စုံတွေအတွက် မတူညီတဲ့ Dress ပေါင်းများစွာကို Miuccia Prada ကဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးဟာ ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ တန်ဖိုးကြီးအ၀တ်အစား အငွေ့အသက်တွေနဲ့ လွှမ်းခြုံနေခဲ့ပါတယ်။
10. James Bond :Spectre
နာမည်ကျော် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားကတော့အထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားတွေရဲ့ လက်ရှိမင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့ Daniel Craig အတွက် Costume တွေကို ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tom ford ကတာ၀န်ယူပေးခဲ့တာပါ။ ဒီဇာတ်ကားထဲက အထူးလျှို့ဝှက်အေးဂျင့်တစ်ယောက်အနေနဲ့ Craig ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Bomber Jacket နဲ့ Suit တွေကတော့ Ford ရဲ့ အကောင်းဆုံးသော လက်ရာတွေလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Editor စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းများ
ပရိသတ်တွေလည်း ဘယ်ကားကို အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာ ပြောပေးသွားဦးနော်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ပိတ်ရက်တွေမှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊ ဇာတ်ကားတွေကို အကုန်ကြည့်ပြီးကြပြီလား။ ဒီနားရက်လေးမှာ Editor ကတော့ ရုပ်ရှင်တော်တော်များများကို ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အကြိုက်ဆုံး Movies တွေကို မကြည့်ရသေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ ကြည့်ပြီးတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း ဘယ်ကားကို အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာ ပြောပေးသွားဦးနော်။
မာ့ချ်မိသားစုရဲ့ ညီအစ်မလေးယောက်အကြောင်းကို ပုံဖော်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုပါ။ မိသားစုကြားမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ လူငယ်တွေကြားမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ပထမပိုင်းမှာ နည်းနည်းပျင်းစရာကောင်းပေမယ့် ကြည့်ရင်းနဲ့ ပျော်ဝင်သွားစေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပါ။ မိသားစု အချစ်၊ လူငယ်တွေကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အလွမ်းအဆွေး ခံစားချက်တွေ အစုံကို ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ ပုံဖော်ထားတာမို့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသဲစွဲ မင်းသား Kim Rae-Wonနဲ့ မင်းသမီး Gong Hyo-Jin တို့နှစ်ယောက်အတွဲညီညီသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Creazy Romance ဇာတ်ကားလေးကတော့ ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုလေးထူထောင်ချင်ပေမယ့်လဲသူချစ်ရတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ရတော့မယ့်အချိန်မှာပဲ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲလက်ထပ်ပွဲပျက်သွားတဲ့ပြီးအရက်သမားဖြစ်သွားတဲ့လီဂျေးဟွန်းနဲ့ အချစ်ကိုအယုံအကြည်မရှိတော့ဘဲထင်ရာစိုင်းလုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး ယောကျာ်းတွေကိုဖြားယောင်းတတ်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ အိုဆမ်ယောင်းတို့နှစ်ယောက်အလုပ်တစ်ခုတည်းမှာတွေ့ကြတဲ့အခါမှာ သူတို့ နှစ်ဦး ဘယ်လို ရှေ့ဆက်ကြမှာလဲ။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခရီးလမ်းကရော သာယာနိုင်ပါ့မလား။ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရဦးမလဲဆိုတာတော့ ဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါနော်။
မွေးကတည်းက ပြဌာန်းလိုက်ပြီးသား ဘဝတစ်ခုကနေခဏတာ သွေဖည်ပြီး ကိုယ်တိုင် ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့ရာ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ ဥရောပအလယ်ပိုင်း မထင်မရှားနိုင်ငံတစ်ခုကတော်ဝင်မင်းသမီးလေး ကာလီလေးဟာတကယ်တမ်းမှာတော့ လုံလောက်တဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးကိုတစ်နှစ်အတွင်းမှာ မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ပြန်ရမယ့်ရက်နီးလာခါမှ ကြုံတောင့်ကြုံခဲပွဲတော်ကြီးတစ်ခုကိုစီစဉ်ပေးရဖို့ဖြစ်လာပါတယ် ။ဒါ့အပြင် သူနဲ့ အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရမယ့် တွဲဖက်ကိုလူချောတစ်ယောက်လည်းပါလာပါတယ်။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ ကြိုးစားပြချင်တဲ့ကာလီလေး ဒီအခွင့်အရေးကို အမိအရဆုပ်ကိုင်နိုင်မှာလား။သူ့ရဲ့ ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ မင်းသမီးဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုကိုရော အဆုံးထိ လျှို့ဝှက်သွားနိုင်မှာလားဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ်ကြီးပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့နော်။
Action ကားကောင်းကောင်းတွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် ဒီကားလေးကို ကိုရီးယား Action ကားကောင်းတစ်ခုအဖြစ် ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ ရဲဘက်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိ မိန်းမပျိုတစ်ဦးရဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအကြောင်းကို ပုံဖော်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါ။ ဒီကားရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိမှုတွေကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်မှပဲ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းရိုးအီနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေထဲကနေ ခွဲထွက်နေတဲ့ ဒီကားလေးဟာ Action ကားချစ်သူတွေအတွက်တော့ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုပါ။
အချစ်ကားကောင်းကောင်းကြည့်ချင်သူတွေအတွက်ကိုတော့ After ကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေရဲ့ အချစ်ကို ကိုးကွယ်တတ်တဲ့ မိုက်ရူးရဲ အချစ်အကြောင်းကို ပုံဖော်တဲ့ အချစ်ဖန်စီဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ တက်ဆာဆိုတဲ့ စာတော်ပြီး အမေစိတ်တိုင်းကျ ကြိုးစားနေတဲ့စာကြမ်းပိုးမလေးတစ်ယောက် ကောလိပ်ကို ရောက်လာကာ အမေဖြစ်သူက စီစဉ်တဲ့အတိုင်း ဘဝကို နေထိုင်ရင်း ဘဝကို ပေါ့ပေါ့လေးဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဟာဒင်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူဘာတွေ ပြောင်းလဲ သွားမှာလဲ။ ဟာဒင်ကရော တက်ဆာကို ချစ်မိခဲ့တဲ့နောက် ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာမလဲ။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခရီးလမ်းကရော ဖြောင့်ဖြူးပါ့မလားဆိုတာကို ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ကြည့်လိုက်ဖို့ ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
#TV & Movies
၂၀၂၀ နှစ်စပိုင်းရဲ့ လူပြောအများဆုံးနဲ့ ကြည့်ရှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ K Drama Series များ
K Drama Series တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် တစ်ဝကြီးကြည့်ရှု့နိုင်မယ့် လူကြိုက်အများဆုံး Series တွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးမှာမို့ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
အပိုင်း ၁၂ ပိုင်းပါဝင်တဲ့ Medical Drama Series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကျောင်းအတူတူ တက်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ၅ယောက် ကျောင်းပြီးလို့ ဆေးရုံတစ်ခုတည်းမှာ အလုပ်တူတူလုပ်ကြတဲ့အခါ ဆရာဝန်ဘဝရဲ့ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းမှုတွေအကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ သူတို့ဘဝတွေရဲ့ အကြောင်းတွေကို ပုံဖော်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ၅ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ ပုံစံတွေကို တွေ့မြင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက Webtoon ကနေ Drama ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ် ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး အဓိက ဇာတ်ကောင်ကတော့ ဒုဥက္ကဌ ''Park Soe Joon'' ပါ။ ဒီဇာတ်ကားအတွက် Webtoon ထဲက ဇာတ်ကောင်အတိုင် ဆံပင်ပုံစံကို တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်အောင် ညှပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ကူးတွေ ၊ တီထွင် ပုံတွေ ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟန်ပန်တွေ အပြင် ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစွာ တွေ့မြင်ရမယ့် Series တစ်ခုပါ။ အပိုင်း ၁၆ ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။
လတ်တလော ရေပန်းအစားဆုံး အိမ်ထောင်ရေးဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါ။ အပိုင်း ၁၆ ပိုင်းပါဝင်ပေမယ့် အခုချိန်ထိတော့ အပိုင်း ၈ ပိုင်းသာ ထွက်ရှိထားပြီး နောက်ထွက်ရှိလာမယ့် အပိုင်းတွေကိုလည်း ပရိသတ်က မျှော်တလင့်လင့်နဲ့ စောင့်စားနေဆဲပါ။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုအဖြစ် The World of the Married ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ပရိသတ်တွေအကြား မသိသူမရှိလောက်အောင်ကို အောင်မြင်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါ။
Crash Leading On You
ရင်ခုန်စရာ Romance Series ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာ မဖြစ်မနေကြည့်ရမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဆိုတာ အများကြီးညွှန်းစရာမလိုလောက်ပါဘူးနော်။ စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဟာဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာရဲ့ ဆက်ခံသူဖြစ်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားမိန်းကလေးနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အဆင့်မြင့် စစ်တပ်အရာရှိ ကောင်လေးတို့ကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း ၁၆ ပိုင်းပါဝင်တဲ့ ဒီ Series တွဲလေးဟာ အပိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာ ပရိသတ်ကို ဆွဲခေါ်သွားစေနိုင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါနေတာမို့ အာရှတလွှားမှာ ပရိသတ်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်အချစ်တော်မင်းသား လီမင်ဟိုရဲ့ စစ်မှုထမ်းပြီးကာလမှာ ပထမဆုံးထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါ။ အပိုင်း ၁၆ ပိုင်းပါဝင်တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့ကစပြီး အပတ်စဉ် သောကြာနဲ့ စနေနေ့တိုင်း ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ည၁၀ နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၇နာရီခွဲ) မှာ ကိုရီးယား SBS ရုပ်သံလိုင်းကနေ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီး ယင်းထုတ်လွှင့်မှုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Netflix မှာ ည ၉ နာရီအချိန်မှာ ပြန်လည် ကြည့်ရှု့နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လီမင်ဟိုကားတွေကို မျှော်နေတဲ့ ပရိသတ်အတွက်တော့ ရင်ခုန်စေမယ့် Romance ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
#Korea Drama Series
မြန်မာကားကောင်းကောင်းကြိုက်သူများအတွက် မြန်မာရုံကြီးဇာတ်ကားကောင်း Collection
Online ပေါ်မှာ အလွယ်တကူရှာဖွေကြည့်နိုင်မယ့် မြန်မာရုံကြီးကားကောင်းတွေအညွှန်းကို ဖော်ပြပေးမယ်နော်။
တစ်နေ့ တစ်နေ့ Social Media ကြည့်ရင်းအချိန်ကုန်နေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် နားနေတဲ့အခုလိုအချိန်လေးမှာ စိတ်အပန်းဖြေကြည့်ရှု့နိုင်ဖို့အတွက် Online ပေါ်မှာ အလွယ်တကူရှာဖွေကြည့်နိုင်မယ့် မြန်မာရုံကြီးကားကောင်းတွေအညွှန်းကို ဖော်ပြပေးမယ်နော်။
ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင် အကယ်ဒမီဆုရရှိခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 'ရင်ဘတ်ထဲကဓား' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ဖခင်ဖြစ်သူအား သတ်လိုက်သည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် မိခင်ဖြစ်သူကို ကလေးဘဝတည်းကပင ်စိတ်နာကာ မိမိကိုယ်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်ရန်ကြိုးစားလာခဲ့သူ လရိပ်ဝေးမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်လာချိန်တွင် ချစ်သူ ဆေးကျောင်းသား သီဟနိုင်နှင့် လက်ထပ်ရန်ပြင်ဆင်ပုံ၊ ယင်းအချိန်တွင် ထောင်မှ လွတ်လာသည့် မိခင်ဖြစ်သူအား စိမ်းကားစွာပင် ကြိုဆိုခဲ့ပြီးနောက် အိမ်ထောင်ပြုပြီးချိန်တွင်လည်း တစ်အိမ်စီသာ နေခဲ့ပုံ၊ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ပြီးပြည့်စုံအောင် တည်ဆောက်ချင်သည့် လရိပ်ဝေး၏အိမ်ထောင်ဖက်မှာ ကလေးဆန်ကာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူဖြစ်ပြီး ပျော့ညံ့တွေဝေသူတစ်ဦး ဖြစ်နေသည့်အပြင် ယောင်းမနှင့် ယောက္ခမတို့၏ သွေးထိုးမှုများကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဝေးကွာလာခဲ့ပုံ၊ အိမ်ထောင်ဖက် သီဟနိုင်၏ ဖောက်ပြန်မှုကို သိရှိလာပြီးနောက် ရွံရှာမုန်းတီးသော်လည်း မိမိရင်သွေးလေး၏မျက်နှာဖြင့် ခွင့်လွှတ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းရပုံတို့ကို ပုံဖော်ထားကာ အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ထောင်ပြီးချိန်တွင် သာယာလှပစေလိုသော်လည်း မျှော်လင့်သည်နှင့် လွဲချော်သည့်အခါ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ခံစားချက်၊ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်ထံမှ အထင်ကြီးလေးစားမှုကိုမရဘဲ အတွင်းစိတ် သိမ်ငယ်မှုဖြင့် အမှားများစွာ ကျူးလွန်သူ အမျိုးသား၏ခံစားချက်၊ မိမိဒေါသကြောင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို သတ်မိသည့် အပြစ်အတွက် သမီးဖြစ်သူ၏ အမုန်းကိုရခဲ့သည့် မိခင်တစ်ဦး၏ကြေကွဲမှုများအား သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးချင်းက ပီပြင်စွာပုံဖော်ထားခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
'ကျွန်မက နှင်းဆီပါမောင်' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ထားသခင်က ဖခင်နဲ့ မိခင်တို့ရဲ့ တကွဲတပြားစီဖြစ်နေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေမှုကြောင့် ဖခင်ရဲ့အမေ လောင်းကစားကို ခုံမင်တဲ့ အဘွား ဒေါ်ထားခင်ရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ မြေးမလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘွားအေရဲ့အလို လိုက်မှုနဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက တစ်ပါးသူအပေါ် အဆင့်အတန်း ခွဲခြားဆက်ဆံပြီး မောက်မာတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ တစ်နေ့မှာ သူမတို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပြင်ဦးလွင်က မဟူရာစံအိမ်ကြီးကို သွားရောက်လည်ပတ်ရင်း ခြံထဲမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ စိုင်းခွန်းသဆိုတဲ့ ရွယ်တူကောင်လေးနဲ့ အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင်ဆက်ဆံရေးပုံစံနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ မာနကြီး ခက်ထန်တဲ့ထားသခင်ရဲ့ ဗိုလ်ကျတဲ့အပြုအမူ တွေဖြစ်တဲ့ ဖိနပ်စီးခိုင်းတာ၊ ဖိနပ်ရေဆေးခိုင်းတာ စတာတွေကြောင့် ခွန်းသအနေနဲ့ မကျေမနပ်ဖြစ်ရပုံတွေကို ဝါရင့်ကလေးသရုပ်ဆောင်ဟဲဗီးဖြိုးနဲ့ ယွန်းယွန်းတို့က သဘာဝကျကျ သရုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ နောက်တစ်ခေါက် ပြင်ဦးလွင်ကို သွားရောက်တဲ့ အခါမှာလည်း လူပျို၊ အပျိုအရွယ်ဖြစ်နေပေမယ့် ထားသခင်က နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် သူ့ဖိနပ်ကို ခွန်းသအနေနဲ့ ထပ်စီးပေးရတဲ့အခြေအနေတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ခွန်းသအနေနဲ့ အမျက်ဝင်လို့ ထားသခင်ကို တစ်နေ့ ပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ဆိုပြီး သူမရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာပဲ ကြုံးဝါးခဲ့ပါတယ်။ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ ထားသခင်ဟာ နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူလည်း သေ၊ အဘွားရဲ့ လောင်းကစားကြွေးတွေကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ကုန်တဲ့အပြင် အဲဒီစိတ်နဲ့ပဲ အဘွားဖြစ်သူဟာ နောက်ဆုံးမှာ ကွယ်လွန်သွားပါတော့တယ်။ တစ်ကောင်ကြွက်ဘဝ ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ထားသခင်ဟာ တစ်ဝမ်းတစ်ခါးအတွက် လောကဓံရဲ့ ကြမ်းတမ်းမှုတွေကို စတင်ရင်ဆိုင်ရပါပြီ။ ပထမဦးဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဖိနပ်ရောင်းတဲ့ ကောင်တာမှာ အရောင်းစာရေးမအလုပ်ကိုလည်း သူမရဲ့ကြွပ်ဆတ်ဆတ်အမူအရာကြောင့် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူဌေးကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ခွန်းသနဲ့ တွေ့ဆုံလို့ ထားသခင်နဲ့ ခွန်းသတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ မာနနဲ့ ကလဲ့စားချေမှုတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးရှိ ဒေါက်တာ မြတ်ထွန်း၌ ဝေဒနာသည် ဇနီး မသစ္စာ ရှိသည်။ ဒေါက်တာ မင်းခန့်မှာ ဒေါက်တာမြတ်ထွန်း၏ အားလုံးရသော တပည့်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးယူရန်ဟူသည့် အကြောင်းပြချက်မှ စကာ မေကြာဖြူ ဟူသည့် မိန်းမငယ်က ဒေါက်တာမြတ်ထွန်းအား အရောတဝင်ပြုလာသည်။ မေကြာဖြူမှ အနောက်တိုင်း၌ ပညာသင် အလုပ်လုပ်နေသူ ဖြစ်သည်။ ယခုမူ မြန်မာပြည် ပြန်လာကာ ဂျာနယ်တိုက်ထောင်ထားသည်။ အသက်နှင့် သိက္ခာအရ ခပ်ဖယ်ဖယ်နေရသော်လည်း စိတ်ကမူ သာယာမိသည်။ မကြာမကြာလာနေသည့် မေကြာဖြူအား သဘောကျနေသူမှာ ဒေါက်တာမင်းခန့် ဖြစ်သည်။ တစ်ခါသော် ပြင်ဦးလွင်သို့ တာဝန်နှင့်သွားကာ အလည်လွန်၍ မေကြာဖြူ၏အိမ်၌ အိပ်သည်။ မေကြာဖြူက ဗိုက်အောင့်သည်ဆိုကာ စည်းရုံးရေးဆင်းသော်လည်း လွန်စွာဣန္ဒြေကြီးသည့် ဒေါက်တာမြတ်ထွန်းက ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့သည်။ ညနက်သော် သွေးဆင်း၍ သူငယ်ချင်း သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်ထံ ညကြီးမင်းကြီး သွားပြရသည်။ ကနဦးတွင် ထိုဆရာဝန်က အထင်လွဲသေးသည်။ သို့သော် မကြာမီပင် ပြေလည်သွားသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် မန္တလေးမှ ဒေါ်သစ္စာ ဆေးရုံတင်ရကြောင်း သတင်းရ၍ အမြန်ဆင်းလာသည်။ ဒေါ်သစ္စာက မေကြာဖြူမှာ ဖိုးခွား၏အစ်မဟု ပြောသည်။ သို့မှသာ အဖြစ်အပျက်ကို သဘောပေါက်လာသည်။ ဖိုးခွားမှာ မန္တလေးသို့ ခေတ္တလာစဉ် သွေးဆိပ်တက်သဖြင့် ဆေးရုံတင်ရသူ ဖြစ်သည်။ အခြေအနေမကောင်းသဖြင့် ဒေါက်တာမင်းခန့်ကိုသာ သင့်လျော်သလို စီမံရန် လွှဲလိုက်သည်။ ဤသည်ကို ဆရာဝန်ကြီးက တာဝန်မဲ့စွာ ကိုယ်တိုင်လာမကြည့်ဟု ယူဆကာ ဒေါက်တာမြတ်ထွန်း သိက္ခာကျ ဘဝပျက်စေရန် မေကြာဖြူက ကြံစည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မကြာမီပင် ဒေါ်သစ္စာ ဆုံးသည်။ မေကြာဖြူလည်း အဖြစ်မှန်ကို သဘောပေါက်ကာ နိုင်ငံခြားသို့ ပြန်သွားသည်။ နောင်သော် ဒေါက်တာမြတ်ထွန်း ရန်ကုန် ပြောင်းရပြီး ဒေါက်တာမင်းခန့် ပညာတော်သင်ရကာ နိုင်ငံခြား သွားရသည်။ ဒေါက်တာမြတ်ထွန်း၏ အောင်သွယ်မှုဖြင့် မေကြာဖြူနှင့် ဒေါက်တာမင်းခန့်တို့ အဆင်ပြေသွားကာ လောကကြီး နေသားတကျ ဖြစ်သွားလေသည်။
ဇာတ်လမ်းအရ Jaden ဟာ မြန်မာ့အထင်ကရ နေရာတွေဖြစ်တဲ့ ပုဂံ၊ မန္တလေး၊ အင်းလေး စတဲ့နေရာတွေကို သွားတယ်၊ မြန်မာ့အက ဂီတတွေကို လေ့လာတယ်။ အဲမှာ သဘောကျမိတာက ဒီလို မြန်မာ့အလှ ဘာညာကွိကွတွေကို အတင်းကြီး ထိုးကျွေးတာတွေ မရှိခဲ့ဘူး။ "ခုခေတ် ဂီတ ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး၊ ဦးတို့ ရိုးရာ တူရိယာတွေက ဘယ်လို၊ တောသူတောင်သားတွေက ဘယ်လို၊ အနောက်တိုင်း ဆေးကြီးပဲ အားကိုးမနေနဲ့၊ ရိုးရာဆေးက အကောင်းဆုံး" ဆိုပြီး စကားကြီး စကားကျယ်တွေ အတင်းကြီး ပြမထားဘူး။ ပုဂံက လှတယ်၊ အင်းလေးက လှတယ်။ ဒီ လှတဲ့ shot တွေချည်း ပစ်ထည့်မထားဘူး။ ပြချင်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်အောင် အများကြီး ကြိုးစားထားတယ်။ Cinematography မှာလည်း တော်တော်ကို ခက်ခက်ခဲခဲရိုက်ထားတာမျိုး တွေ့ရတယ်။ ပြောခဲ့သလိုမျိုး over ဖြစ်တဲ့ဘက် မရောက်အောင် တော်တော်လုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုထိန်းထားလို့လည်း တချို့နေရာတွေမှာ ဇာတ်ရှိန် သိပ်မတက်ဘဲ အရမ်းငြိမ်သွားတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ ဥပမာ နောက်ဆုံးအခန်းဆို ဒီထက် နည်းနည်း emotion လေး ပိုထည့်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်။ (spoiler alert: သားအဖ ၂ ယောက် ပြန်တွေ့တဲ့ အခန်း တော်တော်လေး မိုက်ပေမဲ့ သိပ်မကြာလိုက်ဘဲ မြို့ပြန်လမ်းခွဲသွားတာမျိုး) အဲလို ရိုးရာဓလေ့တွေကို အများစု အခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့လို ဒီ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့ အရမ်းအသားကျပြီးသား၊ သိပြီးသားသူတွေအတွက်တော့ နည်းနည်းပျင်းသွားနိုင်တာတော့ရှိတယ်။ နိုင်ငံတကာက ပရိတ်သတ်တွေကတော့ တော်တော်သဘောကျမှာပါ။ Mudra's Calling ဟာ လုံးဝ Best movie ကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုက်ထားတာတွေကို တော်တော်ခက်ခဲ ပင်ပန်းမယ်ဆိုပေမဲ့ သူ့နောက်မှ ရိုက်တဲ့ Deception ကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ရိုက်ထားတာ တော်တော်ကိုကြာနေပြီဖြစ်လို့လည်း ပါပါတယ်။ မင်းသားမင်းသမီးတွေဆို အထဲနဲ့ အပြင်နဲ့တောင် ရုပ်တွေမတူတော့ဘူးနေမှာ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာ ထွက်ခဲ့သမျှကားတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ standard အရှိဆုံး ကားတွေထဲက တစ်ကားပါ။
Self-Isolation အချိန်မှာစိတ်ခွန်အားတွေပေးနိုင်မယ့် အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်များ
ရုပ်ရှင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခုကျန်နေခဲ့မှာပါ
COVID-19 ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ အိမ်မှာပဲ နေရတာ ပျင်းနေကြပြီလား။ ဒါက မိမိအတွက်သာမက တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်မို့ အိမ်မှာပဲနေကြပါနော်။ ဒီလို Quarantine အချိန်မှာ စိတ်ညစ်နေသူတွေ အတွက်ပိတ်ရက်မှာ စိတ်ခွန်အားတွေပေးနိုင်သလို စိတ်အပန်းလည်းပြေစေမယ့် Indian Drama ကားကောင်းကောင်းလေး သုံးကားကို ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီဇာတ်ကားလေးတွေက တကယ်လူ့ဘောင်လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတွေကို ရသမျိုးစုံပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ကူးပြထားတာမို့ ကြည့်ရှုပြီးသွားသူအတွက် Entertaining လည်းဖြစ်သလို ရင်ထဲမှာလည်း ခံစားမှုတစ်စုံတစ်ရာနဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးနိုင်တာမို့ လက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုကြည့်ဖို့ Recommend ပေးလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Comedy-Drama ကားလေးဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Garui Shinde ကရိုက်ကူးထားတာပါ။ Garui Shinde ရဲ့ Best Debut Director ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ Sashi Godbole ကအိမ်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ Indian Hand-made “Laddoos” မုန့်တွေကိုရောင်းချပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုက English ဘာသာစကားမကျွမ်းကျင်တာကြောင့် သူမရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ သမီးရဲ့ အထင်သေးနောက်ပြောင်မှုကိုခံရတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားငယ်စိတ်ဝင်နေသူပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ NewYork မှာနေတဲ့ Sashi ရဲ့တူမဖြစ်သူ Meera ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာတာမို့ မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင် ငါးပတ်အလိုတည်းက NewYork ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့သမီးကတော့ မင်္ဂလာပွဲနီးမှလိုက်လာကြမှာပါ။ Sashi ရဲ့English အားနည်းမှုကြောင့် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်နဲ့ NewYork ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဘာသာစကားအခက်အခဲပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ပြီးနောက်မှာတော့ English စကားပြောသင်တန်းလေးတစ်ခုကို ဘယ်သူမှမပြောပဲတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ English Class လေးမှာလည်း သူငယ်ချင်းအသစ်တွေအများကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ အဲ့လိုနဲ့ တူမဖြစ်သူ Meera ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲနီးကပ်လာတဲ့အခါ…။
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ မင်းသားကြီး Shah Rukh Khan ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Drama ကားလေးဖြစ်ပြီး Emotional ဖြစ်စေမယ့် Drama ကားလေးတစ်ကားပါ။ ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အထင်မှတ်ထားတဲ့ လောကဓံတရားတွေကို ကောင်းကောင်း Handle လုပ်နိုင်ဖို့ လှလှပပလေးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ မင်းသမီး Kaira (Alia Bhatt) က တက်ကြွတဲ့ Cinematographer တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ချစ်သူ Flim Producer နဲ့ လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ သူမရဲ့ နေရာထိုင်ခင်း၊ မိသားစုပြဿနာများကြောင့် သူမဟာ အရင်လို မပျော်ရွှင်နိုင်တော့သလို၊ ညဖက်အိပ်မပျော်တဲ့ ရောဂါ (Isomnia) ကိုခံစားနေရသူပါ။
အဲ့နောက်မှာ သူမရဲ့ စိတ်ဝေဒနာကိုကုသပေးမယ့် Psychologist “Jug” (Shah Rukh Khan) နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာ သူရဲ့ Mental Health နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံပြုချက်တွေအတိုင်း သူမကိုယ်သူမသင်ယူတတ်လာသလို စိတ်ကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်လာတယ်။ သူမဘဝမှာ အဲ့လိုပြန် Recover လုပ်ယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေလည်းဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ သူမဘဝရဲ့အလှည့်အပြောင်းတွေကို ဘယ်လို ပြန်လည် Handle လုပ်ခဲ့လဲ၊ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲဆက်လက်ရှုစားလိုက်ပါနော်။
အမျိုးသမီးတွေကို ခွဲခြားဖိနှိပ်ထားတဲ့ လူ့ Society ထဲက ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီး အားကစားသမားအကြောင်းကို Highlight လုပ်ထားတဲ့ Women Empowerment ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး မျိုးချစ်နပန်းအားကစားသမား Mahavir Singh Phogat ရဲ့ အထ္ထုပတ္တိ ကိုရိုက်ကူးထားတာဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ တစ်ချိန်က နပန်းသမား Mahavir (Aamir Khan) ကအမျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲကနေ သူရဲ့ သမီးနှစ်ယောက်ကို သူ့လိုပဲလက်ရွေးစင် နပန်းကစားသမားတွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်အဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာပါ။ Mahavir ကသူ့လို အားကစားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သားတွေလိုချင်ခဲ့ပေမယ့် သမီးလေးယောက်မွေးလာခဲ့ပါတယ်။ သူ့သမီးတွေထဲက Gita နဲ့ Babita နှစ်ယောက်လုံးက ငယ်ငယ်တည်းက ကျန်းမာသန်စွမ်းသလို ဖခင်လိုပဲ တိုက်ခိုက်တဲ့စွမ်းရည်တွေရှိကြတယ်။ အဲ့ဒါကိုလည်း Mahavir သတိပြုမိတာမို့ သမီးနှစ်ယောက်စလုံးကို Professional နပန်းအားကစားသမားတွေလို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ ဒီလို Train လုပ်ပေးရင်း Gita နဲ့ Babita ရဲ့စွမ်းရည်တွေကို National Sports Academy က သဘောကျသွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလဲဆိုတာ ရုပ်ရှင်ကားတစ်လျှောက်လုံး စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာပါ။
ညဖက်ကြည့်ဖို့ မသင့်တော်တဲ့ ကြောက်စရာ Horror Movie Collection
ဒီတစ်ခါမှာတော့ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ အလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်မယ့် ထူးခြားထိတ်လန့်ဖွယ် Horror ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးမယ်နော်။
ပရိသတ်ကြီးကို ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ စ လယ် ဆုံး ဆွဲခေါ်သွားမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ပျော်ရွှွင်ကြည်နူးမှု ထိတ်လန့်မှု ခြောက်ခြားမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဒီကားဟာHorror Movie ပရိသတ်အတွက်တော့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်ရဲ့ Best Horror Movies List မှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
နာမည်ကျော် The Shawshank Redemption ဇာတ်ကားရဲ့မူရင်းစာရေးဆရာ Steven King ရဲ့ နာမည်ကျော် စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်လည် ရိုက်ကူးထားတဲ့ Horror Movie ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုတစ်ခုဟာမကြာသေးမီအချိန်ကပဲ ဆိုးရွားတဲ့လူသတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့၊ ရာသီဥတုဆိုးတဲ့ဆောင်းတွင်း ကာလမှာပိတ်ထားရပြီး အင်ဒီးယန်းတွေရဲ့ သုဿန်မြေဟောင်းပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ ကော်လိုရာဒိုကရှေးဟောင်းဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ဆောင်းတွင်းဘက် ဟိုတယ်အစောင့်အလုပ်ကို လက်ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော သူတို့ဘာတွေ တွေ့ကြုံရမလဲ…………။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ထိပ်တန်းHorror Movies List မှာပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဇာတ်ကားဟောင်းဖြစ်လို့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြိုက်နှစ်သက်မယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်မှာပါ။
ဒီ Horror ကားဟာ ကားအဟောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပေမယ့် သွေးသံရဲရဲနဲ့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကြောင့် သူတို့နိုင်ငံမှာပြသခွင့်တောင် ပိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။ သွေးသံရဲရဲနဲ့ ကြောက်စရာကောာင်းတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေပါဝင်တာကြောင့် ကလေးတွေနဲ့အတူတူ မကြည့်ဖို့တော့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို တွေ့ကြုံလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကွယ်က ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
မိသားစုတစ်စုရဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သူသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက် ကြုံတွေ့ရတဲ့ မျိုးရိုးအစဉ်အဆက်ရှိတဲ့ ထိတ်လန့်စရာလျှို့ဝှက်ချက်တွေအကြောင်းကို ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံဖွယ်ရာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။ သူတို့မိသားစုရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာဖြစ်မလဲ။ ကြောက်ရွံဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးတွေထဲကရော ဘယ်လိုရုန်းထွက်ကြမလဲဆိုတာ ရင်တထိတ်ထတ်နဲ့ စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဂန္တဝင် Horror ကားကောင်းတစ်ကောင်းဖြစ်တာကြောင့် အများကြီးညွှန်းဖို့မလိုအောင် ကောင်းတဲ့ Horror ကားတစ်ကားပါ။ အော်စကာဆု ၄ ဆုရရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တာနဲ့ အညီ ကြည့်ရတဲ့ ဇာတ်ကွက်တိုင်းဟာ ထိတ်လန့်ရင်ဖိုဖွယ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေမှာပါ။ ဒါရိုက်တာ Alfred Hitchcock ရဲ့နာမည်ကျော် နာမည်ကျော်ဖန်တီးမှု လက်ရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် လက်လွှတ်တမ်းကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာ အထူးညွှန်းဆိုစရာမလိုလောက်တော့ပါဘူးနော်။
အပိုင်းသစ်ထွက်တိုင်း မကြည့်ရ မနေနိုင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းတဲ့ Netflix Series ငါးခု
အလုပ်လုပ်ရင်း နားရင်းနဲ့ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုကြရအောင်နော်။
Stay Home ကာလလေးမှာ အလုပ်လည်းလုပ်ရင်း နားချိန်မှာ၊ လာမယ့် သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ Relax ဖြစ်အောင် ကြည့်ရှု့နိုင်မယ့် Series တွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးမယ်နော်။ အလုပ်လုပ်ရင်း နားရင်းနဲ့ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုကြရအောင်နော်။
American Drama Series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Witcher ဟာ Netflix မှာ လူကြိုက်များတဲ့ Series တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ Season 1 ( အပိုင်း ၈ ပိုင်း) သာ ထွက်ရှိထားပြီး နောက်ထပ် Season တွေ ထပ်ထွက်လာဖို့ရှိပါသေးတယ်။ စူပါမန်းမင်းသား ဟင်နရီကာဗေး ပါဝင်ထားတဲ့ The Whitcher ဟာ နာမည်ကျော်စာအုပ်နဲ့ ဂိမ်းတွေကို အခြေခံထားတာပြီး မိစ္ဆာတွေ စုန်းတွေ နတ်ဘုရားတွေ တိုင်းပြည်ကိစ္စတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းဖွဲ့ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အတိုက်အခိုက်ကားတွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်တော့ Series ကောင်းတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တို့အတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြံပေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Series တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Season 1 ကို အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ Season2ဟာလည်း မျှော်လင့်ထားသလို ဇာတ်အိမ်ကောင်းတဲ့ Series တစ်ခုဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲနော်။
ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ Peaky Blinders ဆိုတဲ့ ဂန်းစတားဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Peaky Blinders ဆိုတဲ့ လူဆိုးအဖွဲ့က အင်္ဂလန်မှာ တကယ်ရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဂန်းစတားဇာတ် ကြမ်းကြမ်းတွေကို နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ လက်မလွတ်ချင်စရာ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။
ဟာသကားတွေကိုမှ ကြိုက်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုတော့ ဗြိတိန်ဟာသအကြမ်းစား ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The End of the Fucking World ကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့ ဗရုတ်သုတ်ခဇာတ်လမ်းဆိုပေမယ့် Viewer တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းတဲ့ Series တစ်ခုပါ။ Season2အထိထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်မွှေထားတဲ့ ပြသနာတွေအကြောင်းကို ကြည့်ရင်း တွေးရင်းနဲ့ ရယ်စရာအဖြစ် ပုံဖော်ထားတဲ့ ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါ။ ဒီလိုဟာသမျိုးတွေက ဇာတ်လမ်းက ရယ်စရာမကောင်းသလိုစကားတွေ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း မရယ်ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တွေးရင်းရယ်ရမလို ပြုံးရမလို စိတ်ညစ်ရမလို ဖြစ်စေတတ်တာမျိုးပါ။
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေကို ပုံဖော်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရဲ့ စူးစမ်းလိုစိတ်၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းတဲ့ သရုပ်ဖော်ကို ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ ကြည့်ရှု့သူတွေ မပျင်းရအောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်တွေလုပ်ရင်း သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ အေးအေးဆေးဆေး ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို စုစည်းထားနိုင်ဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီမို့ ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာပိတ်ရက်လေးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါစေနော်။
Fashion Inspiration အပြည့်ရစေမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေ
Fashion ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်တော့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေဖြစ်မှာပါနော်။
Fashion ကိုလေ့လာနေသူအတွက် Fashion နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံး Idea တွေ၊ Inspiration တွေရရှိစေဖို့အတွက် အခုရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို ကြည့်ဖို့အတွက် ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီဇာတ်ကားလေးတွေကနေတဆင့် ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်လို့ Fashion ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်တော့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေဖြစ်မှာပါနော်။
နာမည်ကျော် ပြင်သစ် Designer Yves Saint Laurent ရဲ့ သူ့ဘဝရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် စတင်ခဲ့ရင်း business partner Pierre Bergé နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပုံ၊ ကြိုးစားခဲ့မှုတွေနဲ့ သူရဲ့ လက်ရာဒီဇိုင်းတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကို ခံစားကြည့်ရှု့နိုင်မယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Street Style တွေကို အများဆုံးရိုက်ကူးတဲ့ New York Fashion Photographer Bill Cunningham ဟာ ဖက်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေမှာ အလွန်အသေးစိတ်သူတစ်ဦးပါ။ စ်သည်။ ဘီလ်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖက်ရှင်လောကနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလွန်တင်းကြပ်သောအတွေးအခေါ်များရှိခဲ့ပြီး၊ သူရဲ့ Documentary Shows ဟာ Fashion လောကကို ဘယ်လောက်အထိ လွှမ်းမိုးခဲ့လဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်မှာပါ။
The September Issue လို့ ခေါ်တဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ ဖက်ရှင်တွေကိုဖန်တီးနေတဲ့ American Vogue Magazine ရဲ့ ဘယ်လိုဖန်တီးမှုတွေကို ပြုလုပ်နေလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ ဒီ Documentary ကို ကြည့်ဖို့ ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Documentary ကနေတစ်ဆင့် ခမ်းနားတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ ဖက်ရှင်အမြင်သစ်တွေကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
Fashion ချစ်သူတွေအတွက်လေ့လာနိုင်မယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကောင်းဖြစ်တဲ့ The Devil Wears Prada ဟာလည်း လက်မလွတ်သင့်တဲ့ ကားတစ်ကားပါ။ ရေပန်းစားနေတဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ Smart Fashion တွေကို လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Miranda Priestly ရဲ့စုဆောင်းခြင်းဖက်ရှင်တွေဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မှာပါ။
ပြင်သစ်ဒီဇိုင်နာ Coco Chanel ရဲ့ ဒီဇိုင်နာမဖြစ်ခင် အစောပိုင်းကာလသူမဘဝအကြောင်းကို ပုံဖော်ထားတဲ့ Biographical Drama Film ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ အိပ်မက်အတွက် အချိန်ပြည့်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ သူမပုံဖော်ဖန်တီးထားတဲ့ Fashion တွေကို မြင်တွေ့ခံစားနိုင်မယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Celebrity/Model တွေမဟုတ်တဲ့သူတွေကို Cover Star အဖြစ်ဂုဏ်ပြုလိုက်တဲ့ Vogue Magazine